Xirsi Toorile Iyo Parliament
Hargeysa, 9 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
Khilaafkii u dhexeeyey Golaha Wakiilada iyo Xakuumada Somaliland ayaa gaadhay meel xasaasi ah, ka dib markii la ogaaday in Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Xirsi Xaaji Cali uu Xildhibaanada ka dhaadhiciyey Mooshin lagu ridaayo Gudoomiyaha Wakiilada somaliland , oo isagu beryahan danbe la wareegay awoodii golaha.
Mudane Xirsi oo Qasriga Madaxtooyada ka maqnaa mudo 4 bilood ah,ka dib markii ay Qoyska Madaxtooyada isku fahmi waayeen maamulka Qasriga, ayaa hada la sheegayaa in looga maarmi waayey hawlihii shaqo ee uu qaban jiray,gaar ahaan Xisbiyadii Mucaaridka oo aad moodo inay u heshiiyeen Xisbul Xaakimkii Kulmiye oo xataa xubnihiisii la fadhateestay.
Xirsi oo aad moodo in awood dheeraad ah laga soo siiyey Mafaxtooyada ayaa sheegay in Xisbiyada Mucaaradku Sanka Caano ka keeni doonaan,isagoo dhinaca kalena Lacag badan ku baayacaaya dhamaan Xildhibaanada Somaliland si ay u ridaan Mr. Ciro , iyo weliba inay u codeeyaan in cod hal dheeri ah lagu ridi karo Gudoomiyaha, halkii markii hore lagu ridi jiray tiro ah 55 Xildhibaan, hadana noqonaysa 42 Xildhibaan.
Dhanka kale Mr. Ciro ayaa ku mashquulsan sidii uu Baarlamaanka u keeni lahaa Mooshin ka dhan Madaxweyne Siilaanyo oo lagu eedaynaayo xil gudasho la'aan iyo inuu qadiyadii Somaliland ku soo ururiyey Hargeysa. maalmaha soo socda ayaa la filayaa in lagu kala baxo cidii Gudoomiyaha Baarlamaanka qabsan lahayd .